I-Tall Gums Guesthouse
Barrington, New South Wales, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jennifer
Indawo yokuhlala yesitayela sestudiyo esizimele, etholakala endaweni engamahektha ayi-5 edolobhaneni laseBarrington, eduze neGloucester kanye namapaki Kazwelonke aseduze. I-Guesthouse isendaweni enokuthula, futhi i-WiFi nokwamukela amaselula kukhawulelwe kumafoni akwa-Telstra. Kukhona ukubukwa kwendawo yasemaphandleni kanye nethuba lokubuka izinyoni. U-Jenny ujabulile ukukwamukela noma ukuzihlola kukunika ukukhetha ukuhlala uyimfihlo.
Sicela uhlole izithombe ukuze ubone isimo sendlu yezivakashi kanye nezinsiza.
Imvula yakamuva yenze isifunda sibe luhlaza. Sebenzisa i-Tall Gums Guesthouse njengesizinda sakho sokuhamba nge-kayak eMfuleni i-Barrington, vakashela i-Barrington Tops National Park, i-Aussie Ark noma uvakashele amabhishi ase-Hallidays Point noma e-Forster Tuncurry (uhambo lwehora ngemoto).
Kungumqondo omuhle ukuhlola e-Gloucester Information Centre kanye neHhovisi le-NPWS e-Gloucester mayelana nezindawo ezikhangayo ongazivakashela kanye nolwazi lwakamuva mayelana nokuvalwa kwemigwaqo noma ipaki.
IBarrington iyidolobhana elithule lasemaphandleni eliqhele ngamakhilomitha ayi-6 kuphela ukusuka eGloucester. IBarrington inesitolo esijwayelekile sikaphethiloli, igilosa nokudla. I-Nearby Gloucester inamakhefi adumile, izitolo ezinkulu, isitolo se-Drifta, izitolo zezingubo nezipho, igalari yezobuciko kanye neNdawo yokubhuka enhle kakhulu yezincwadi ezithandwayo.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-1966-2